XOG CUSUB: Kenya oo sheegtay sababta ay duulimaadkii tooska ee Muqdisho iyo Nairobi u joojisay!
By Horumar-Staff - 12, May 2019
Nairobi (Horumar Online) – Kenya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay maalmo kadib, markii ay joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi,kaas oo loo wareejiyey Magalada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari.
Agaasimaha Guud ee Hay’adda Duullimaadka Rayidka Kenya, Kabtan Gilbert Kibe ayaa sababta loo joojiyey duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdsho iyo Nairobi ku sheegay arrimo la xiriira sababa amni.
Isaga oo la hadlayay wargeysa The Nation ayuu sheegay in duulimaadyadaas la hakiyey ilaa 9-ka Bisha Agoosto intaasi wixii ka dambeeyana dib u eegis lagu sameyn doono si looga gaaro go’aan ah in dib loo bilaabo duulimaadyadii tooska ahaa iyo in gebi ahaanba la joojiyo.
Waa markii labaad oo dowladda Kenya ay joojiso duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi, waxaana sanadkii 2016-kii Kenya amartay in duulimadka tooska ah la joojiyo, isla markaana Diyaarada ka ambabaxdo Muqdisho ay sii mari jirtay Magaalada Wajeer.
DF Soomaaliya oo ka hadashay go’aankii Jimcihii ay gaartay Kenya ayaa sheegtay in ay tahay arrimo siyaasadeeed, iyada oo la ogyahay in dowladaha Kenya iyo Soomaaliya uu xilligaan ka dhaxeeya muran la xiriira arrimaha badda.
Lama oga jawaabta rasmiga ah ee arrintaan ku aadan oo ay dowladda uu hoggaamiyo Farmaajo ka bixin doonto, walow dowladda Kenya mar walba ay hor-is-taagto horumarka yar ay dowladda Soomaaliya sameyso.
Tags: #Duulimaad #hakin #joojin #Kabtan Gilbert Kibe #Kenya #Muqdisho #Nairobi
Previous Post Diyaarado dadka Suxuurta u kiciya bisha Ramadan
Next Post Garowe: Dil toogasho oo lagu xukumay 3 ka mid ah raggii loo heystay kiiskii Caaisha Ilyaas